Beta yechina yeTVOS 12.2 uye watchOS 5.2 ikozvino inowanika kune vanogadzira | Ndinobva mac
Maawa mashoma apfuura, vakomana vanobva kuCupertino vakatanga beta yechina yemhando dzakasiyana dzekushanda dzavari kushanda parizvino kumidziyo yavo yese, vese inoitirwa munharaunda yekuvandudza. Maawa mashoma gare gare, yaburitsawo yechina yeruzhinji beta yeiyo iOS 12.2, iyo imwechete beta iyo yaakavhura kune vanogadzira.
Parizvino, vakomana vanobva kuCupertino vanoita kuti zviwanikwe kunharaunda ino mabheti eIOS 12.2, watchOS 52, tvOS 12.2 uye macOS 1014.4. Beta yechina yeanoshanda system yeApple TV uye Apple Watch izvozvi zvave kuwanikwa kune vanogadzira. Kana iwe uri mushandisi weiyo tvOS yeruzhinji beta, uchafanirwa kumirira maawa mashoma kuti iwanikwe, nekuti iyo watchOS beta haisati iri mukati mechirongwa ichi.
Tiri mumwedzi waKurume. Kwasara mwedzi miviri kuti vakomana veCupertino vabate musangano wekuvandudza, musangano unozivikanwa seWWDC uye mune iyo nhau dzese dzinouya kubva muruoko rweanotevera mavhezheni eIOS, tvOS, macOS uye watchOS zvinoratidzwa. Nezve iyo yekupedzisira, nezuro takaburitsa chinyorwa icho kugadzirisa kwaigona kugamuchira iyo inoshanda system yeApple Watch, kuvandudza nekuwedzera, kunyangwe zvakanyanya, mashandiro aanotipa nhasi.
Pamabheja ese Apple aburitsa, Iyo chete inoshanda sisitimu iyo inogashira yakakosha nhau kana iyo vhezheni yekupedzisira yasvika pamusika iOS 12.2Sezvo mamwe masisitimu anoshanda asingatipe mabasa matsva, nekuti Apple yakanangana nekuvandudza zvese kuchengetedzwa kwemidziyo yavanogadzirisa uye mashandiro.
Kuti utore XNUMX beta yeWatchOS, unofanira kutanga vane chitupa chekuvandudza chakaiswa pane yako iPhone uye vhura iyo application kumanikidza kurodha kwenyowani nyowani. Kana iwe uchida kurodha beta yechina yeApple TV, uchafanirwa kushandisa Xcode.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Beta yechina yeTVOS 12.2 uye watchOS 5.2 ikozvino inowanika kune vanogadzira
Software mainjiniya izvozvi zvakakosha kupfuura mainjiniya eApple kuApple
Google inowana "kukwirira kwakanyanya" bug mune macOS Mojave kernel